News Collection: युवती-युवती सम्पर्क..........
म २६ वर्षीया अविवाहित महिला हुँ । दुई-तीन वर्षअघिदेखि मैले एक युवतीसँग यौनसम्पर्क गर्दै आएकी छु । हामी दुई युवती-युवती भए पनि सम्पर्कको बेला आनन्द आउँछ । सम्पर्क भएका बेला दुवैको योनिबाट तरल पदार्थ र्झछ । यद्यपि हिजोआज पहिलेको जस्तो आनन्द आउँदैन र त्यसमा त्यति रुचि पनि छैन । पहिले-पहिले दिनको एकपटक अनिवार्य रूपमा गरिन्थ्यो भने अहिले त सातामा एकपटक पनि सम्पर्क गर्न मन लाग्दैन । यसले गर्दा हामीलाई विवाहपछि कुनै समस्या त पर्दैन ?
तपाईंको सम्बन्ध कस्तो ?
हामी जन्मजात नै यौनिक हुन्छौं। किशोरावस्थामा विशेष गरी यौन भावना प्रबल हुन्छ र यो स्पष्ट रूपमा प्रकट भएर पनि आउँछ। यसै क्रममा अर्को व्यक्तिप्रति यौनका दृष्टिले आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो। धेरैजसो व्यक्ति विपरीत लिङ्गप्रति आकषिर्त हुन्छन् तर कतिपय व्यक्ति समान लिङ्ग भएकै व्यक्तिप्रति यौनका दृष्टिकोणले एक-अर्काप्रति आकषिर्त हुन्छन्। तपाईंहरू एक-अर्काप्रति आकषिर्त हुनुभएको छ कि छैन, लेख्नुभएको छैन। यौनका दृष्टिकोणले विपरीतलिङ्गीप्रति आकषिर्त हुने व्यक्तिलाई हामी 'विपरितलिङ्गी' यौन परिचय भएको मानिस भन्छौं भने समान लिङ्ग भएको व्यक्तिप्रति आकषिर्त हुनेलाई 'समलिङ्गी' (homosexual) र यस्तो 'पन'लाई समलैङ्गकिता (homosexuality)। यौनका दृष्टिकोणले पुरुष तथा महिला दुवैप्रति आकषिर्त हुने व्यक्तिलाई हामी द्विलिङ्गी (bisexual) भन्छौं। कतिपयचाहिँ किशोरावस्थामा नौला कुरा प्रयोग (experimentation) गर्न खोजे पनि पछि आफ्नो प्राकृतिक स्वभावमा मिल्ने क्रियाकलापमै संलग्न हुन्छन्। किशोरावस्था पार गरिसक्नुभएकाले तपाईंको यौनभावना अनि यौन परिचय स्थायी भैसकेको हुनुपर्छ।
युवती-युवतीको सम्बन्धमा पनि आनन्द आउँछ ?
हामीलाई थाहै छ, हाम्रा इन्दि्रयहरूबाट सन्देश प्राप्त गरेर मस्तिष्कले त्यसलाई अथ्र्याएपछि त्यसलाई बुझिन्छ। इन्दि्रयबाट प्राप्त गरिने सन्देश यौनउत्तेजक भए यौन उत्तेजना बढ्छ। विपरीतलिङ्गी व्यक्तिले विपरीतलिङ्गीको शरीर यौन आकर्षक पाउँछ भने समलिङ्गी व्यक्तिका लागि समान लिङ्ग भएका व्यक्ति नै, तर त्यसको अनुभूति गर्ने व्यक्ति आफैंले हो। अरू व्यक्ति त यसका लागि सहयोगी मात्र हुनसक्छन्। तपाईंलाई थाहै होला, यौन परिकल्पना गर्दा वा हस्तमैथुन गर्दा व्यक्तिले आफैंबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्छ भने आफू यौनका दृष्टिकोणले आकषिर्त भएको अर्को व्यक्तिसँग यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा वा यौनसम्पर्क गर्दा नपाउने कुरै भएन। त्यसैले युवा-युवतीमा यौनसम्पर्क हुँदा पनि आनन्द आउँछ नै।
पहिलेको जस्तो किन मन नलागेको होला ?
तपाईंलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ, यौनचाहना व्यक्तिअनुसार फरक-फरक भएजस्तै उनीहरूको यौन क्रियाकलापमा संलग्नता पनि फरक-फरक हुन्छ। यौनसम्पर्कको सन्दर्भमा पनि कसैले धेरै पटक यौन सम्पर्क राख्छन् भने कसैले थोरै। आफू तथा आफ्नो यौनजोडीलाई असजिलो नहुने स्थितिमा चाहेजति यौनसम्पर्क गर्न सकिन्छ, तर पनि सामान्यतः व्यक्तिले कति यौनसम्पर्क गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरौं। सामान्य व्यक्तिले हप्तामा यस्तै २ देखि ५ पटक यौनसम्पर्क राख्छन्। विवाहको तुरुन्तै पछि जोडीले अलि धेरै पटक यौन सम्पर्क राख्छन्। सामान्यतः विवाह गरेको पहिलो वा दोस्रो वर्ष सम्म एक दिनमा -२४ घण्टा) एकपल्ट यौन सम्पर्क राख्छन्। त्यसपछि भने यो क्रम हप्तामा २ देखि ३ पटकमा र्झछ अनि वयस्क जीवनको लामो समयसम्म रहन्छ। विस्तारै प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि भने त्यसमा कमी आउँछ।
तपाईंको सन्दर्भमा विवाह नभए पनि विवाहितको जोडीले जस्तै नियमित रूपमा यौनसम्पर्क गर्न पाउनुभएका कारण यो कुरा लागू भएको हुनसक्छ। यौनसम्पर्कका सन्दर्भमा नयाँ-नयाँ प्रयोग गरेर कसरी संलग्न हुने भन्ने कुरा खोजी गरी लागू गर्नुभयो भने पक्कै यौनसम्पर्क गर्ने कुरामा बढी रुचि हुन सक्छ।
कतै विवाहपछि समस्या त पर्दैन ?
तपाईंले के कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो राम्रोसँग बुझिएन, तैपनि एक किसिमले भन्ने हो भने त खासै समस्या पर्दैन भन्दा हुन्छ, तर यो त्यति सजिलो कुरा पनि होइन। मुख्य कुरा तपाईंको यौन परिचय अर्थात् तपाईं समलिङ्गी हो वा होइन भन्ने कुरा तथा विवाह पुरुष वा महिला कोसँग हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यदि तपाईं विपरीत लिङ्गी हुनुहुन्छ भने समस्या खासै नपर्न सक्छ, तर तपाईंको यो यौनसम्पर्क तपाईंको श्रीमान्लाई कुनै कारणवश थाहा भयो र उहाँलाई मन परेन भने समस्या पर्न सक्छ।
तपाईं यदि पूर्ण रूपमा समलैंगिक हुनुहुन्छ भने यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो हुनेछ। कुनै पुरुषसँगको विवाह भए सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन निकै कठिन हुनसक्छ। कुनै एक पुरुषको जिन्दगी त्यसै बरवाद हुन सक्छ। तपाईंले पनि दोहोरो जिन्दगी जिउनुपर्ने हुन्छ, जुन कष्टकर सावित हुनसक्छ। अर्कातिर, तपाईंले चाहेको जस्तो महिलासँग विवाह गरिए यौनजीवन राम्रै होला। तपाईंले अहिले यौनसम्पर्क राखेकी महिला समलिङ्गी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। विवाहका लागि अहिले सम्बन्ध भएको महिला (युवती) लाई मनाउनु वा उहाँ समलिङ्गी हुनहुन्न रहेछ वा तपाईंसँग विवाह गर्न नमान्नुभएको स्थितिमा अर्को व्यक्ति भेट्टाउनु सजिलो कुरा होइन। केही गरेर चाहेको महिलासँग विवाह भैहालेको स्थितिमा विवाहित जीवनयापन गर्न अहिलेको नेपाली समाजमा निकै गार्‍हो छ। तपाईका आफन्त, छिमेकी तथा साथीभाइका लागि पनि यो त्यति सजिलो विषय हुँदैन। अनेक सामाजिक अप्ठयाराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। समलैंगिकतालाई संसारकै धेरैजसो समाजले तटस्थ भएर नहेर्ने भएकाले समाजका अरू मानिसलाई थाहा भए अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै महिलासँग विवाह भए पनि पुरुषसँग विवाह भए पनि त्यसका आफ्नै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यसमा पहिलेको तुलनामा नेपाली समाज बढी सहनशील हुँदै गएको देखिन्छ।